ikhaya » iindaba » IiNgcaciso zeVidiyo ze-IP zakutsha ezivela kwi-TVU Networks kwi-BroadcastAsia
IiNgcaciso zeVidiyo ze-IP zakutsha ezivela kwi-TVU Networks kwi-BroadcastAsia
IHLOMO LOMBONO, CA- EI-BroadcastAsia Exhibition & Conferencekule veki,TVU NetworksZiza kugxininisa ukuphuhliswa kwangoko kwi-IP-based ecosystem yenkampani yezinto eziphathekayo kunye neprojekthi yesofthiwe, imirhumo yomsebenzi kunye neenkonzo zokufumana ividyo-vidiyo, ukuveliswa, ukuphathwa nokusabalalisa. Isisombululo esitsha se-TVU esisekelwe ngamafu senzelwe ukunceda abasasazwa ukuba baphathe umxholo wevidiyo ukususela kwenye indawo.
I-TVU iya kubonisa isisombululo esitsha kwangokokuqala e-Asia ngexesha loboniso. Inkampani iya kubonisa ngaphakathi kwendawo yokuthengisa, iSingapore-based based Magna Systems kunye nobunjineli, (iBooth 4S3-05).BroadcastAsiaIbanjwe eSuntec Singapore kwaye iqhutywa ngo-Meyi 23-25.
I-TVU Enye yefowuni yomthutha weselula, ngoku iqukethe i-HEVC compression:
Ukugxilwa kwendalo ye-TVU yinkqubo yokusasazwa ngokugqithiseleyo ngokuzenzekelayo kunye nokudibanisa kwe-IP-based-based description of workflow. Inkqubo yeVVU ye-ecosystem iquka zonke iindawo zokuvelisa, ukusuka ekuthengeni ukuya kubaphathi ukusabalalisa.
Ukwenza i-BroadcastAsia yokuqala ibe yiyo: i-TVU One mobile cell transmitter ene-HEVC compression; Umvelisi we-TVU, isistim esisekelwe kwiwebhu ukuvelisa umxholo wokuphila kwiimidiya zentlalo; I-3.0 ye-3.0 yenkomfa ye-cloud-Based management solution, i-TVU Command Centre; Ukuhlanganiswa kwe-TVU kunye ne-Associated Press 'AP ENPS inkqubo yokuvelisa iindaba; I-200 ye-RV ye-TVU (i-Remote Production System) ekuveliseni ukuveliswa kweekhamera ezininzi eziqhelekileyo kunye nesakhelo sokuvumelanisa ngokuchanekileyo; Kunye ne-TVU Router entsha, ekhupha i-XNUMXMbps yokuxhumeka kwe-Intanethi ethembekileyo, esesigxina kunye nokusebenzisa iisiseko zeselula kunye neendawo zokufikelela kwi-Intanethi.
I-TVU Enye nge-HEVC yinkampani ephathekayo ephathekayo ephathekayo ye-IP ehambisa iindaba eziphathekayo eziphakamileyoUkuhanjiswa kwevidiyo ye-IP. I-TVU Enye nge-HEVC isisombululo seselula esetyenziswayo isebenzisa zombini i-HEVC yokunciphisa ividiyo kunye ne-TVU ye-Inversive Statmux Plus (IS +) yokudlulisa i-algorithm yokuthumela HD Ividiyo esemgangathweni ene-latency yesibini. Ngokusebenzisa umgangatho weH265 wokunciphisa, i-TVU enye isebenzisa idatha engaphantsi kwaye ivelise ngaphantsi kweendleko ezikhokelela ekunciphiseni iindleko zokusebenza kunye nokunyaniseka okukhulu kokudluliselwa. I-TVU Enye nge-HEVC ifumaneka ngeemodemu ezifakwe kwi-modems kwaye ingadlulisela ngokuxhomekeke kwiinkcukacha ezininzi, kuquka i-cell, i-microwave, Sathelethi, BGAN, WiFi, kunye ne-Ethernet.
I-TVU Command Centre inikeza ukulawula okupheleleyo kunye nokusetyenzwa kokufumana ividiyo, ukuveliswa, ukuphathwa nokusabalalisa ukusuka naphina usebenzisa i-intanethi yomsebenzisi. Isiko soMlawuli sibonisa isethi esinamandla sezinto zokulawula abaphambili bevidiyo kunye nabamkeli; Ukutshintsha, ukuhamba kunye nokuhanjiswa kweefayile zevidiyo eziphilayo; Ukulandelwa kweendawo zeGPS zokuhambisa abaphilayo kwintsimi; Uhlaziyo lwedeshibhodi kunye nokunye. I-TVU Command Centre iphinde ifane ne-TVU Alert kunye noMvelisi we-TVU.
Umvelisi we-TVU wenzelwe ukuvumela nabani na ukuba bakhiqize umgangatho wobungcali bevidiyo ekhoyo kwiwebhu, kungakhathaliseki ukuba liphi lamava. Ukugijima kwi-TVU Transceiver, umvelisi we-TVU kwenza abasebenzisi basasazo bakwazi ukuvelisa lula umxholo wevidiyo kwiiplani zeendaba ezinkulu zentlalo. Umvelisi uhlanganiswe ne-Facebook Live, i-YouTube ephilayo kunye ne-Periscope kwaye ibonisa indlela elula yokusebenzisa iWeb. Ngomvelisi we-TVU, umvelisi wezedijithali wesitishi angasebenza ngaphakathi kwendlela yokuhambisa ukusasaza efanayo njengomvelisi wemveli weTV. Abasebenzisi banokutshintsha ngokungahambiyo phakathi kwemithombo yokuhambisa ye-TVU engenayo, izixhobo ze-SDI kwaye zilayishe imithombo ye-slate yevidiyo, engeza umzobo ogqityiweyo, kwaye usasaze umkhiqizo oveliswe kwii-platform ezisekelwe kwiwebhu.
I-TVU inikezela i-API evulekileyo kwintsapho yayo yesisombululo sevidiyo, ukuvumela abapapashi ukuba basebenzise inzuzo yezixhobo zokusebenza ezichazwe kwi-software. I-APU evulekileyo ye-TV iya kudibanisa namanye amapulatifomu esofthiwe kunye nokuxhaswa kwezinto ezisemgangathweni zomsebenzi, njengemethadatha kunye ne-software ezenzekelayo. Amaqela amaninzi asebenzisanayo ahlangene ne-TVU ye-API evulekileyo kuquka ne-Panasonic, Associated Press, Ngaphantsi Nabanye.
I-TVU kunye ne-Associated Press (AP) zidibanise ngokubambisana i-intanethi ye-newsroom ye-newsroom yokufumana umsebenzi wokuveliswa kwemveliso eyenziwe ngokusetyenziswa kobugcisa kunye nokusebenzisa i-API evulekileyo ye-TVU. Inkqubo entsha yokuhamba kwemisebenzi yemethadatha ichaza ukuxhuma ngokuthe ngqo kumxholo weendaba kumabali athile eendaba kwiindawo zokufumana. I-TVU Alert kunye ne-AP ENPS idibanisa kwaye ikhawuleza ukudluliselwa kunye neyona nto ingumxholo odibeneyo kwi-studio nakwii-solutionsroom zokuvelisa izixhobo. Uluhlu olutsha lomsebenzi lujoliswe ekuphuculeni ukusebenza kunye nokukhawuleza kokuthengwa kwemithombo yeendaba ngokuzenzekelayo kunye nokunciphisa isidingo sokungenelela kwangaphakathi, ngelixa kunika nokuguquguquka okukhulu.
I-TVU Router yindawo yokufikelela kwi-intanethi ekwazi ukunika i-200Mbps ye-intanethi ekhuselekileyo, ethembekile, esheshayo kunye ne-intanethi ngaphandle kwanoma yiphi na indawo isebenzisa izixhobo zeselula ezingenazintambo. Nge-router, abasebenzisi bangadlulisa kwaye bafumane iifayile, baqhube ividiyo, bafune iwebhu, okanye basebenzise nayiphina i-IP axhunye idivayisi okanye inkonzo yokudlula idatha. Okwakubonwakude be-TVUP kunye ne-TVU Abathengi bodwa, i-TVU Router iyinketho yesofthiwe ekhoyo.
I-TVU Router isekela umgca we-Panasonic we-AVC-ULTRA camcorders kunye ne-P2 Inkqubo yokushicilelwa kwenkcazelo yefayile. I-router ikhulisa kakhulu amandla okuhambisa ama-camcorders AVC-ULTRA ngokudala uxhulumaniso olukhuselekileyo, oluthembekileyo nolunokwethenjelwa. I-TVU Router ivumela i-AVC-ULTRA ikhamera ukutshintshela ividiyo okanye ividiyo ekhompyutheni ekhompyutheni ekhompyutheni kwi-IP, eya kuba ngumngeni xa kungenakwenzeka, ukuba umsebenzisi uthembele kuphela kwiikhamera zokusakaza ezikude.
I-SystemU yokuVala iNkqubo yokuThuthwa kweMveliso (RPS) inika enye indlela echanekileyo kwiindawo ezikude ezikude, ezichanekileyo, iinkcukacha zekhamera kunye nemveliso yezemidlalo kunye nesakhelo esifanelekileyo sokuvumelanisa. I-RPS iphakamisa i-studio ye-studio yolawulo lwama-studio ekhoyo, izixhobo kunye noxhumo lwe-intanethi evela kwintsimi. Nge-TVU i-RPS, abasasazo banokuvelisa ukuveliswa kwemveliso ekuhlaleni ngaphandle kwemfuneko yamaloli avelisa amaxabiso, i-fiber ezinikezelweyo, okanye iindawo ezinkulu zokuvelisa kwi-site.
I-TVU iya kubonisa ukunyuswa kwe-TVU6 kwii-TVU eziphathekayo eziphathekayo. I-TVU6 ye-TVU idluliselwayo imele ivelise iimpawu ezintsha ezininzi, kubandakanywa ukukhuphela kwe-Progressive Download. Ukuqhubelela ukukhuphela kwemveliso kwintsimi yokuthunyelwa kwintsimi ngokuthumela ngesantya esiphezulu isithomo-sibuko, ikopi engenayo impazamo yekhompyutri ebhalwe phantsi kwi studio njengoko ityhulwa. Kwakhona kuqukwa nesevisi entsha yeVoIP esebenza kwii-TVU izixhobo zokuphakamisa izinga eliphezulu, iindlela zokunxibelelana ezimbini phakathi kweso studio kunye nentsimi. Kwaye i-TVU6 iquka ukhetho SMPTE I-2022-6 / -7 inqanaba eliphezulu lokuxhaswa kwe-IP yokudibanisa ne-studio yophambili ye-studio workflows.
I-TVU iya kuzisa i-TVU Smart Caption kwi-BroadcastAsia. Isisombululo sokwazisa ngezwi eliphambili esisebenzisa isilumkiso sobulumko ukuze kufakwe amazwibela okufutshane.
Sekusetyenziswe ngamakhulu amakhulu kwimibutho yokusasazwa ehlabathini lonke, i TVU Networks Isapho isisombululo sokusasazwa kwe-IP sinika abasasazwayo kunye nemibutho isixhobo esinamandla nesithembekileyo sokusabalalisa umxholo wevidiyo ngokusasaza, iiplani ze-intanethi kunye neselula. I TVU Networks Isisombululo sesisombululo sele sisetyenziselwe ukunikela ubugcisa obuphezulu HD Imifanekiso yeembali ezibalulekileyo emhlabeni jikelele kubandakanye iNdebe yeHlabathi, iiMidlalo zeOlimpiki zeHlabathi nezeHlabathi, ukhetho lonyulo luka-US, iintlekele zemvelo, i-2013 Papal conclave, i-Super Bowl, ukutyelela kwe-Papal kwi-2015 e-United States kunye nemidlalo yamanye amazwe Zi ganeko. Ngolwazi olungakumbi malunga TVU Networks Isisombululo, nceda u tyeleleWww.tvunetworks.com.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli BroadcastAsia CES2017 ukudityaniswa Ividiyo ye-IP I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw TVU Networks Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo Ividiyo nge IP ndiphila	2017-05-25
Previous: UkusiNgqongileyo / oMbutho wezeNtlalontle DP kunye neNew Photog iwina MK18-55mm FUJINON Zoom
next: "Imizobo enzulu" yeWarhammer 40,000K Dawn of War III
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "IiNgcaciso zeVidiyo ze-IP ezivela kwi-TVU Networks kwi-BroadcastAsia". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/latest-ip-video-solutions-from-tvu-networks-on-display-atroadbassasia/. Enkosi.